तिथि मेरो पत्रु » हवाई – आफ्नो पाल्तु जनावर संग Visting
द्वारा पत्रु यात्रा
हवाई – आफ्नो पाल्तु जनावर संग Visting
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 18 2020 |3मिनेट पढ्न
महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका छैनन् जबकि हवाई एक रेबिज मुक्त राज्य छ, तिनीहरूले संगरोध गए सम्म यसरी घरपालुवा जनावरको हवाई मा अनुमति दिइएको छैन.
यो द्वीप गर्न आगंतुकों आफ्नो पाल्तु जनावर ल्याउन सकून् भनेर पाल्तु जनावर मालिक यात्रा को महत्व चिनन हवाई विधायिका नियम परिवर्तन. वर्तमान नियम मात्र कुकुर लागू & बिल्ली.
तैपनि तिनीहरूले सजिलै गरेका छैनौं लाग्यो र यो महंगा छ, तपाईं ठीक तयार यदि तिनीहरूले तुरुन्तै होनोलुलु हवाई अड्डा मा आगमन तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर जारी गर्नेछन्.
एक कदम – पशुचिकित्सक प्रमाणपत्र – एक मूल हुनु पर्छ – कुनै फोटोकपि. यो प्रमाणपत्र तपाईंको पशुचिकित्सा भन्दा बढी द्वारा जारी हुनुपर्छ 14 हवाई मा आफ्नो आगमन गर्न दिन पहिले.
Vaccinations: पालतू रेबिज लागि आफ्नो जीवनकालमा कम्तिमा दुई पटक खोप हुनुपर्छ र ती खोपहरू भन्दा बढी हुनुपर्छ 90 अलग दिन. टीका त एक-वर्ष लाइसेन्स को थियो भने नवीनतम खोप भन्दा बढी गरिएको हुनुपर्छ 12 महिना हवाई मा पाल्तु आउनुअघि. टीका त3वर्ष लाइसेन्स को थियो भने नवीनतम खोप भन्दा बढी गरिएको हुनुपर्छ 18 पूर्व हवाई आगमन महिना. जेहोस् नवीनतम खोप भन्दा कुनै गरिएको हुनुपर्छ 90 पूर्व हवाई आगमन दिन.
तपाईंको पशुचिकित्सा देखि प्रमाणपत्र हाल नै खोप मिति राज्य हुनुपर्छ, र अघिल्लो खोप मिति. प्रमाणपत्र टीका नाम संकेत पर्छ, धेरै वा धारावाहिक नम्बर, booster अन्तराल, खोप मिति, यो एक वा तीन वर्ष लाइसेन्स प्रकार को थियो सिद्धिने मिति र चाहे.
राम्रो स्वास्थ्य: प्रमाणपत्र पाल्तु जनावर राम्रो स्वास्थ्य मा छ कि राज्य हुनुपर्छ र यो Ticks भन्दा बढी लागि उपचार गरिएको छ कि 14 पूर्व उत्पादन Fibronil वा एक बराबर लामो दिगो उत्पादन संग हवाई आगमन दिन. प्रमाणपत्र मा प्रयोग उपचार को मिति र उत्पादन सङ्केत.
कदम दुई – माइक्रोचिप तपाईंको पशुचिकित्सा देखि प्रमाणपत्र माइक्रोचिप को संख्या राज्य हुनुपर्छ र यो पशुचिकित्सा सफलतापूर्वक चिप स्क्यान गर्न सक्षम थियो भन्ने तथ्यलाई हुनु पर्छ.
चिप मानक अमेरिकी मुद्दा हुनुपर्छ (उत्सुक) वा (घर फेरि) प्रकार. माइक्रोचिप को पाल्तु रगत परीक्षण गर्न पूर्व राखिदिनुभयो हुनुपर्छ.
चरण तीन – Oie-FAVN Rabies रक्त परीक्षण तपाईं परीक्षण को परिणाम भन्दा बढी वा 0.5IU / एमएल बराबर थियो भनेर देखाउने एउटा अनुमोदित प्रयोगशाला देखि एक प्रमाणपत्र हुनुपर्छ. यो घरपालुवा जनावरको माइक्रोचिप नम्बर देखाउन पर्छ प्रमाणपत्र. रगत परीक्षण भन्दा बढी गर्नुपर्छ 18 महिना र भन्दा कम 120 पूर्व हवाई आगमन दिन.
तपाईंको पशुचिकित्सा आफ्नो पाल्तु जनावर देखि एक रक्त नमूना लिन र यसलाई जहाज हुनुपर्छ:
कन्सास राज्य विश्वविद्यालय
180 Denison एवेन्यू
चरण चार – आवेदन यी कागजात को वास्तविक पठाउनुहोस् – कुनै फोटोकपी:
पशु क्वरेंटिन शाखा
राज्य हवाई को
99-951 Halawa उपत्यका सडक
को मात्रा मा एक कैशियर चेक वा पैसा आदेश वरिपरि बार लाउनु $165.00 प्रति पाल्तु जनावर.
कागजात र चेक आइपुग्छन् पर्छ 10 को घरपालुवा जनावर आगमन अघि दिन. दस्तावेज भन्दा बढी आफ्नो पशु चिकित्सक तयार हुन नसक्ने भएकोले 14 तपाईं संघीय एक्सप्रेस तिनीहरूलाई पठाउन पर्छ आउनुअघि दिन पत्रु हवाई रिहाई को लागि योग्य.
चरण पांच – आगमन तपाईं मात्र होनोलुलु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल माध्यम र मात्र को घन्टा बीच हवाई प्रवेश गर्न सक्छ 8 छु र9pm. तपाईंको पाल्तु जनावर मा स्थित संगरोध केन्द्र गर्न एयरपोर्ट देखि लगिनेछ 99-951 Halawa उपत्यका सडक, Aiea, हवाई 96701 – टेलिफोन 808 483-7151.
तपाईं कि स्थान मा आफ्नो पाल्तु जनावर पिक अप
5 कुराहरू उहाँले तपाईं आवश्यकता उहाँलाई सम्झाउनुहोस् गर्न भन्न
5 तरिका तपाईंको जीवन प्रेम खोजें!
15 सर्वश्रेष्ठ ट्विटर लेखा डेटिङ सल्लाह मा लागि पालन गर्न 2015
6 एकल गर्मी महिना पार गर्न सुझाव!
बिल्ली र नाता सिकेको पांच जीवन पाठ